La heli karo Xubuntu Saucy Salamander Beta 2 oo leh xoogaa horumar ah | Laga soo bilaabo Linux
In kasta oo aanan mar dambe ahayn isticmaale Xfce, Waa inaan qiraa taas Xubuntu Waa mid ka mid ah qaybinta ugu wanaagsan ee khibrad wanaagsan u leh deegaankan Desktop-ka.
Xubuntu Saucy Salamander Beta 2 Waxay ku timaaddaa isbeddello qaarkood, oo in kastoo in badan oo ka mid ahi aanay khusayn haba yaraatee, ugu yaraan haddii ay hagaajinayso waayo-aragnimada isticmaalaha sida aan kor ku soo sheegay. Aan aragno isbeddelada ugu waaweyn:
Nooca cusub ee xfce4-dejinta oo ay ku jiraan, iyo waxyaabo kale, hagaajinta qaabeynta kormeerayaasha.
Gtk-theme-config ayaa lagu daray, qalab si fudud loogu qaabeeyo mawduucyada Gtk.
Nooc cusub oo ah Mawduuca Xubuntu Gtk oo leh taageero loogu talagalay Gtk 3.10, hagaajinta LightDM iyo cilado muuqaal ah oo qaarkood la hagaajiyay.
Dukumiintiyada la cusbooneysiiyay.
Haddii aad rabto inaad tijaabiso:
Soodejiso Xubuntu 13.10 Beta2
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Qaybinta » Xubuntu Saucy Salamander Beta 2 ayaa lagu heli karaa xoogaa horumar ah
Daabacaad wanaagsan xubinta. Haddii ay yeelan lahayd mawduuc shucaac ah markaa taasi wey fiicnaan lahayd.
Waxaan ahay inbadan oo Greybird ah.
Aniga, Xubuntu, waxaan doorbidayaa qaabka aasaasiga ah ee ay gacanta ku hayaan.
Waxaan u adeegsadaa mawduuca Abatroos + Faenza Darker icons for XFCE in archlinux waxayna umuuqataa mid qurxoon.
Miyaanay jiri doonin mawduuc u eg daaqada uumiga?
Aan aragno sida ay cusbooneysiintu tahay. Mahadsanid @elav.
Xalay waxaan tijaabinayay ku dhowaad 2 saacadood waana inaan dhahaa waan jeclahay ...
elva miyaad xustay in betakan Xubuntu uu u keenayo mawduuca GTK Numix
faahfaahin yar oo ay adag tahay in qofna dareemo salaanta 😉
Waa maxay, miyaanan sii isticmaalin GreyBird? Weli ma awoodin inaan cadeeyo.
Haddii aad isticmaasho Greybird, dabcan… laakiin haddii aad gasho goobaha> Muuqaalka> waxaad arki doontaa marka lagu daro mawduuca Greybird inay sidoo kale ku jirto mawduuc Numix ah iyada oo aan loo baahnayn in la isticmaalo bakhaarro dibadeed
xcfe 4.12 sanadka 2020
Garyaqaan Ibliis dijo
Faallooyinkaani wax ma ku kordhinayaan? Waa run in mararka qaarkood dadku sawirradooda ka qaataan, waana iska cadahay cidda u heellan jarista si ay u kiciso khilaafaadka bilaashka ah.
Ujawaabi Garyaqaanka Shaydaanka
Adigu waad gooysay.
Beta fiican, waan jeclahay, laakiin waqtigan xaadirka ah waxaan ku raaxeysanayaa OS4 oo aan la socdo XFCE. 🙂
Haye iyo waxa desktop aad hadda isticmaasho elav?
@elav wuxuu KDE ugu adeegsadaa Arch.
Horaan u aqaanay.
Tssss hada waxaan udhaxeeyaa XFCE VS KDE. Labadaba waan jeclahay, laakiin ma garanayo midka aan hadda dooranayo.
Kaalay XFCE halkan waxaad ku hagaajin kartaa deegaanka dhadhankaaga sida aad ugu sameyso KDE 😉
Kani waa XFCE.
Hadda waxaan ku tijaabinayaa kde, laakiin mmmm ma garanayo, waxaan ka jeclahay xfce si ka fiican. Iyo waxaas oo aad ii soo jiitay kde ka hor, mar aad isku daydo xfce, uma ogolaanaysid: D.
Haa, kde wuxuu yeelan doonaa codsiyo badan asal ahaan ama heer ahaan, laakiin xfce waxaad ku dari kartaa wax walboo oo aad wax uga beddeli kartaa sidaad jeceshahay, isdhexgal aad u fiican oo gtk iyo qt ah, oo aad ku rakibto fiilooyin / codsiyo / barnaamijyo si ay ula mid noqoto ama ka fiican KDE.
Na, waxaan dib ugu noqonayaa xfce: Cute, Light, Personal.
Waxay kuxirantahay. Waxaan ku bilaabay Gnome 2, ka dib talaabo kooban laakiin talaabooyin xoog leh oo aan ku maray Gnome 3 waxaan ku qaatay bil ama wax kale KDE, ka dibna waxaan ku dhammeeyay in ka badan sanad iyo badh XFCE.
Waxaan dhawaan ku soo noqday KDE maaddaama dadku ku mashquulsan yihiin noocyada cusub. Waxaan u isticmaalaa 4.10.5 baaritaanka Debian (Waxaan u maleynayaa in bil gudaheed ama wax ka badan ay ku ridi doonaan 4.11 keydadka) runtuna waxay tahay haddii aad haysatid PC wanaagsan, KDE waa deegaan aad u dhameystiran oo leh fursado badan oo badan. Waxay fududeysay hawlo badan oo aan qabanayay.
In kasta oo aanan dafiri doonin in XFCE had iyo jeer god ku yeelan doono qalbigayga isla markaana aanan diidi doonin inaan maalin uun soo laabto. Malaha maalinta ay sii daayaan 4.12
Sikastaba, dooro waxa adiga kuugufiican adiga waqtigaagana kaydsada.
Kaliya waxaan joogaa KDE waqti dheer kadib waxaan joojiyay isticmaalkiisa markii aan kusugnaa KDE 3. GNOME 2 waxaan kusugnaa intii karaankeyga ah, waxaan kusugnaa waqti gaaban GNOME 3 ilaa aysan waxbadan usii siin hadda waxaan la socdaa KDE PC-ga caadiga ah iyo XFCE ee xoogaa PC-ga ah.
Waxaan ku qanacsanahay 100% Unity on Ubuntu 12.04.
Dhinaca kale, weligay ma jeclayn XFCE, laakiin ka dib markii aan muddo dheer ku sugnaa KDE iyo in kasta oo ay ahayd jawiga ugu dhammaystiran xaaladaha qaarkood haddana waxay ku dubnayd mashiinkayga. Sidoo kale waan jeclahay Gnome Shell laakiin goobta shaqada waxaan ku rakibay Manjaro oo leh 'XFCE' iminkana waxba ugama bedelin, waa sida inaan haysto Gnome2 oo yar laakiin aad uga fudud oo si sax ah u sameeya waxa aan u baahanahay.
Iyo co # @! · & Lahabeyn karo oo si buuxda ugu dhexjira gtk iyo qt.
Ma jiraan wax ka fiican xfce 😀
Tijaabinta haddii aad qaadatid dawada
Waxaan marwalba kugula talinayaa Xubuntu kuwa ku cusub dunida Linux. Runtu waxay tahay sidaad u leedahay, elav, waa mid ka mid ah qashin-qubka khibradda fiican u leh XFCE iyo Manjaro iyo LMDE, feker ahaanteyda.
Waxay u fiicantahay Xubuntu!
Hal shay oo aanan waligay ka qaadi karin qoraalkii hore ayaa ahaa ilmada. Waxaan doonayaa inaan tijaabiyo haddii midkan ay horey u saareen.
Waxa ugu fiican ayaa ah mashiinka meesha aan ku haysto, uma isticmaalo fiidiyowyada, haddii kale waan ka saari lahaa.
Taasi waa cilladda kaliya ee weyn ee aan ku eego xfce oo aanan heli karin sida looga saaro iyada oo aan naafada laga dhigin saameynta.
Kaliya waxaad ka saari kartaa jeexitaanka, compton, compiz ama laxamiistaha kale ee jira ...: /, haddii aad leedahay intel, gelinta ikhtiyaarka ilmada ee xorg.conf, haddii aad leedahay amd, adigoo isticmaalaya darawalka lahaanshaha leh ikhtiyaar ikhtiyaar la'aan ah ama mid bilaash ah oo leh ikhtiyaar exa vsync ..., oo leh nvidia wax fikrad ah kama haysto ...
Shan maalmood kahor noocyo horumarineed oo cusub oo ah libxfce4ui, xfce4-settings iyo xfwm4 ayaa la sii daayay.
xfwm4 oo ka mid ah astaamaha cusub ayaa leh kuwan soo socda: Ku dar taageerada Vsync ee laxamiistaha (bug # 8898), kaas oo xaliya dhibaatada jeexitaanka shaashadda.
By the way with these releeds 4.12 is dhow, kana baxsan sarbeebida saaxiib pandev92 ee kor ku xusan.
Waa maxay «El ilmada» ???
Waxaan qiyaasayaa inay tixraacayaan looxyada laga jaray fiidiyowyada sax?
Miyay noqon kartaa in qaabkan cusub ay horeyba u saxeen taas?
EEBBE HA HELO
Ma fahmin sida aysan u laheyn hufnaan ahaan qoraalka astaamaha
Run! Marwalba waan ka fikiri jiray. Sidee looga hortagi karaa saameyntan foosha xun?